Ngibhala kanjani uhlu oluphelele lwamaphuzu we-Amazon bullet ukuphakamisa ukuguqulwa kwami?
Asikho isidingo sokuthi cishe akukho lutho olungakhuthaza kakhulu kulabo abathengisayo e-Amazon kunokuba kube nokunye ukubhekana nokuthengisa okuphumelelayo. Phakathi kwalaba abanye, ukufakwa ohlwini oluvumelekile futhi oluyinkimbinkimbi yama-bullet amaphuzu ama-Amazon yiyona nto edlala indima enkulu, uma kuziwa esinqumweni sokugcina sokuthenga esithathwe yizivakashi zakho. Yiqiniso, ukuze uthole isigaba se-bullet ngempela uzodinga ukutshala isikhathi kanye nomzamo ekudaleni ucezu oluthile oluthile oluqukethwe - a small office network. Ngakolunye uhlangothi, noma kunjalo, yonke imizuzu esetshenziselwa ukuqedela umsebenzi izohlale ikhokha, ngiyaqiniseka. Into ewukuthi amaphuzu akho we-Amazon amakhophi angashintsha kalula ibe yimpahla yakho eyinhloko eqondisa ukwabelana kwengonyama yamaklayenti akho angakhona ukuze abe abathengi bangempela. Futhi kuza ngaphandle kokuthi isihloko sakho somkhiqizo siyisisekelo esibaluleke kakhulu. Kodwa ngezansi ngizogxila ikakhulukazi ekukhuliseni ukuguqulwa kwakho ku-Amazon ngehlu lwamaphuzu wamaphuzu abhalwe ngendlela efanele. Nakhu ukuthi ungaphumelela kanjani kulokhu okwenzayo.
Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Amazon Bullet Points
1. Okokuqala, izigaba onawo. Ngakho-ke, cabanga kabili ngaphambi kokubeka lezo zakhi zokubaluleka okuyinhloko incazelo yakho yekhasi lomkhiqizo.
2. Okulandelayo, qinisekisa ukusetha izimfanelo ezivelele kakhulu zento yakho ekuthengiseni eduze kwezingqimba zakho zokuqala, okumele zilandelwe yibo bonke ngokulandelana kokubaluleka. Ngamanye amazwi, kunconywa ukubeka amafa akho anamandla kunakho konke ohlwini oluphezulu.
3. Iphuzu ngalinye lezinhlamvu linezinhlangothi ezimbili zomdanso. Ngisho ukuthi ukuba nezinhlamvu ezingaphezu kuka-500 ezivumelekile ngayinye kubonakala sengathi zilinganiselwe ngokwanele. Ngakolunye uhlangothi, akufanele neze uzame ngokugcwele isikhala sonke kuzo zonke izindleko. Yiqiniso, uma ungafuni ukubheka njengokudukisa amakhasimende akho.
4. Wonke amaphuzu alandelayo ohlwini lwamabhulogi kufanele ahlale ekhishwa ekuqaleni.
5. Uma ucabanga ukuthi azikho izidingo eziqinile noma ezidingekile zokubhala izimpawu ezibhekiswe lapho, ukugxila ekubhaliseni imisho ehlukaniswe kakhulu kanye nezitatimende ezimfushane kungaba yisinqumo esenziwe kahle.
6. Yiqiniso, ukhululekile ukufaka ulwazi oluthe xaxa ezintweni eziqondile kakhulu noma ngemininingwane yento. Ngaleyo ndlela, qiniseka ukuthi awugcini nabo.
7. I-Amazon ayivumeli uhlu lwamaphuzu we-bullet ukuthwala idatha emayelana nemanani, noma yiluphi olunye ulwazi lwezinhloso zokukhangisa ngokuvulekile.
8. oqaphele uma uhlanganisa imininingwane ethile, njengombala wento, ukuma, impahla, ubungako, njll Yebo, ngaphandle uma bebaluleke kakhulu ekubalukeni okudinga ukubeka ukugcizelela okukhethekile.
9. Ukusebenzisa amagama amakhulu angukhiye asetshenzisiwe esakhiweni sakho somkhiqizo omkhulu kungaba yinye inzuzo ukunqoba umncintiswano we-cutthroat obusa phezu kwezimakethe ezinkulu ze-Amazon.
10. Ekugcineni, nakuba kungase kubonakale kungabikho-brainer, amaphuzu ama-Amazon amanothi aphezulu awakwazi ukukwenziwa kalula. Ngemuva kwalokho, akuwona wonke umthengi ongeke akwazi ukukukhokhela ukuvakashela nje ukugaya konke okushiwo ukuthi kungani umkhiqizo wakho kuwufanele ukuthenga, akunjalo?